Okuncinci endikubukelayo, izinto ezingcono zifumana! | Martech Zone
Okuncinci endikubukelayo, izinto ezingcono zifumana!
NgoLwesibini, Agasti 14, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha ndiye ndizibuze ukuba ingaba iinjongo zexesha elide ziyasiphazamisa emsebenzini lowo. Ukuba uhlala ulangazelela okungakumbi, ngaba uhlala wonwabile apho ukhoyo? Ngamanye amaxesha kuthatha into eyintlekele ekhaya okanye emsebenzini ukuze siqonde konke esinokubulela ngako.
Kule veki iphelileyo, ibhlog yam ibuyile kulungiso. Ndiqale umsebenzi omtsha kwaye bendisebenza ubusuku ekuphuhliseni esinye isicelo-kwaye bobabini bathatha uxinzelelo oluninzi. Andinguye umgijimi olungileyo- ndiyathanda ukugxila kwinjongo kwaye ndisebenzele ukuyiphumeza. Ngenxa yoko, ukugxila kum emsebenzini wam omtsha ngoku kukhulu. Ngokukhawuleza ukuphuma kwam emsebenzini kwaye nditsibe emotweni yam, ingqalelo yam ijongise kwiprojekthi esecaleni. Ekuqhubeni kwakusasa, kubuyile kukucinga ngomsebenzi wam.
Ukulahleka kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ibhlog yam. Ndiqhubekile nokuthumela ukufundwa kwam kwemihla ngemihla kodwa bekungabalulekanga ngeyona nto ibalulekileyo ngeposi zam. Andikholelwa ukuba baphumelele ngokungxama - kodwa andikhange ndigxile kangako njengoko bendifanele ukubanayo. Mhlawumbi indawo endiyityesheleyo kakhulu yayijonga eyam YeNgeniso yeNgeniso, Uhlalutyo kunye neZikhundla. Ndayazi ukuba ndinomsebenzi ekufuneka ndiwenzile kwaye andinakukhathazeka ngelahleko, ndiye ndagqiba kwelokuba ndingayihoyi.
Umkhwa wokujonga inqanaba lam kunye nokugcwala kwabantu kwaba yinto enkulu! Andikholelwa ukuba ndiza kuyijonga ngaphezulu kwesinye ngosuku, kodwa xa ndibukele amanani lag, bendizakucinga ngayo kangangeeyure ndizame ukulwa nayo. Kuncinci njengokutyhala umva- ukufundwa malunga noku ngesantya, hayi ukusabela. Oko kuthetha ukuba ngumdyarho weembaleki hayi okokubaleka… kwaye kufuneka ndizikhumbuze rhoqo.
Ke-ukuba izibalo zakho azihambi kwicala olifunayo, mhlawumbi kuya kufuneka uthathe ikhefu kwikhampasi. Ndingatsho ngokunyanisekileyo ukuba ndiyaphindaphindeka kakuhle ngoku… ukufunda kwam kunyukile, izibalo zam zokutya zinyukile… kwaye ingeniso yam inyukile. Ndidinga ukwenza eyona nto ndiyenzayo kwaye ndiyincamathisele ixesha elide kwaye ndiyeke ukubukela amanani. Ndiza kubuyela kuyo UkuBhloga iTip nje ukuba iprojekthi yam igqitywe! Enkosi kubo bonke abafundi abalinde ngomonde.
Okuncinci endikubukeleyo, izinto zibhetele zifumana!
tags: uhlalutyouhlalutyo ukukhubazekaUhlalutyo
Umncintiswano wezigidi zeDola Wiki ovela kuJohn Chow dot Com
Fav.or.it Yazisa ngoQeqesho
Agasti 15, 2007 kwi-1: 37 AM
Ibali elincinci elimnandi 🙂 ndingatsho ukuba oku kunjalo kum ngoku, ndijonge izibalo zam zetshaneli zeAdsense rhoqo kangangoko ndinako, kuba ilixesha lokuphucula kum. Kodwa oku kuhlawule, ke kungekudala ndiza kuthoba isantya 🙂
Agasti 15, 2007 kwi-2: 29 AM
Ndiyavuma. Kungalula kakhulu ukuba uthe phithi ngamanani. Ndisajonga izibalo zam kanye ngemini endicinga ukuba zininzi kakhulu.
Gxila nje ekubhaleni umxholo olungileyo kunye nokuthengisa ibhlog yakho kwaye itrafikhi iya kuhlala iza 🙂
Agasti 15, 2007 kwi-8: 12 AM
Ndiyakwazi ukunxibelelana ngokupheleleyo! Kwaye ngakumbi okoko ibhlog yenkampani yam yasiwa kwenye indawo yaza yaqala ekuqaleni kwakhona, iyahlekisa ukuba lingakanani ixesha endilichitha ndixakeke kakhulu ukuza kuthi ga ngoku, izibalo ezibuhlungu kakhulu. Ukuba nje bendinokuphinda ndiqondise la mandla kwizithuba... ukwenza ngcono kakhulu!
Ndikunqwenelela amathamsanqa, ndiqinisekile ukuba nje ukuba ungene kwizinto eziguqukayo uya kwenza ixesha elingakumbi lokuposa!
UHenri @ B2B Blog yokuthengisa
Agasti 21, 2007 kwi-8: 33 AM
Ndiyakwazi ukunxulumana noku kungasentla. Ndicinga ukuba ikwayinxalenye yobomi njengebhlogi (kunye nomntu othengisayo / wokuthengisa). Amaxesha ngamaxesha ndiye ndizifumana ndijonge izibalo zesayithi yam rhoqo. Kuya kufuneka ndizikhabele ngasemva ukuze ndigxile ekuphuhliseni umxholo wokuqala.
Njengomntu othengisayo oqeqeshiweyo ndiyazi oku: Ukuthambekela kokuchitha ixesha kwi-forecast, i-spreadsheets, njl. endaweni yokuhlala phambi kwabathengi bakho ukuvala izivumelwano kunye nokukhathazeka malunga nekhomishini yokukhangela kamva. Njengeblogger kufuneka ndigxile ekufumaneni ababhalisile bam ngokugxila kumxholo weflegi. Kwaye abanye baya kuza njengoko besitsho 😉